သောသီခို: သန့် ရှင်းသော ညမှာ တိတ်တဆိတ် ပြီးဆုံးသွားသော ခရစ်စမတ် ၀တ်ပြုပွဲ
သန့် ရှင်းသော ညမှာ တိတ်တဆိတ် ပြီးဆုံးသွားသော ခရစ်စမတ် ၀တ်ပြုပွဲ
စာဖတ်ပရိတ်သတ်များခင်ဗျား……. အထူးသဖြင့် ကရင်အမျိူးသားများအတွက် Free Burma Ranger အစီရင်ခံစာကို အခြေပြုပြီး သောသီခိုမှ comment ပေးလိုပါသည်။ ဒီမှတ်ချက် စာစု အပြီးမှာ မူရင်း FBR အစီရင်ခံစာ pdf ဖိုင်ကို ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်စေချင်ပါသည်။
ကရင်ပြည်နယ် တ၀ှမ်းမှာ နအဖ စစ်တပ်တွေက နေ့ စဉ်နဲ့ အမျှ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေဒါပါ။ သည့်ပြင် ဒေသခံလူထု တွေကို နေ့ မအားညမအား အမျိူးသား အမျိူးသမီးပါမချန် အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေပါတယ်..နအဖ အခေါ် အညိုရောင်နှင့် အမဲရောင်နယ်မြေ တောတောင်တွေ ထဲမှာ ကျနော်တို့ ကရင်လူမျိူးတွေကို နအဖ ဗမာစစ်တပ်တွေက အမဲလိုက်သလို လူမဆန်စွာ တွေ့ သမျှ လူတွေ ကို အကုန်ပစ်ဒါပါ။ ဒီလို အခြေအနေ မျိူးမှာ တိုက်ပွဲတွေ နေ့ စဉ်ဖြစ်နေတဲ့ တောင်ငူခရိုင်မှာ ခရစ်စမတ်ပွဲလေးကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် ကျင်းပကြဒါ သိလိုက်ရ၍ ၀မ်းသာ မိသလို ၀မ်းလည်းနည်းမိပါသည်။
အစီရင်ခံစာထည့်မှာ စာဖတ်ရသူအဖို့ ကြင်နာမှု၊ နာကျင်မှု၊ တရားဒေသနာ အငွေ့ တွေနဲ့ဖုံးလွမ်းနေဒါပါ။ သို့ပေသော်ငြားလည်း စာပိုဒ် တခုမှာ ရင်နင့်စွာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်…..ထိုစာပိုဒ်မှာ…
ထိုဒေသ တ၀ိုက်မှာ တချိန်က အိမ်ခြေ ၂၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ပြီး ဗမာစစ်တပ် ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် လူသားစိတ်ကင်းမဲစွာ တိုက်ခိုက်မှုဒဏ်ကို ခံခဲ့ကြရပါတယ်။ ယခုဆိုလျှင်ကျန်ရှိနေတဲ့ မိသားစု (၃၀) ဟာခက်ခဲစွာ တရက်လုပ် တရက်စားဘ၀မှာ ဗမာစစ်တပ်၏ ပစ်ခတ်ခြင်းကို လည်း နေ့တိုင်းခံနေကြ ရပါသည်။ ရွာသားတစ်ဦး၏ အဆိုအရ “ဘုရားသခင် ပေးသော အိမ်(သို့ )ဌာနေမြေရာ ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ကျနော်တို့ နေလို့ ရသ၍ ဤအရပ်၌ ဆက်လက်နေထိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အကယ်၍ ကျနော်တို့ ဒီနေရာမှ ထွက်ခွာသွားရင် ၄င်းသည် ဤနေရာဒေသ၌ နောက်ဆုံးကျန်သော ကရင်လူမျိူး ထွက်ခွာသွားခြင်း ဖြစ်မည်”
ကရင်အမျိူးသားအပေါင်းတို့ …နိုင်ငံတကာရောက်သွားသော ကရင်လူမျိူးအပေါင်းတို့ ..ထိုအရပ် ထိုဒေသ ၌ ရှေးပ၀ီသဏီ ကတည်းက နေထိုင်လာခဲ့ကြသော ကရင်များစွာတို့ သည် ယခုဘယ်ရောက်ကုန်ကြပြီနည်း…ယခုဆိုလျှင် မိသားစု(၃၀)သာကျန်ပါတော့သည်။ ဗမာစစ်သားတွေ သတ်ပစ်လို့ ကုန်သွားဒါလား..??? ဒါမှ မဟုတ် ဗမာစစ်တပ်ညှင်းပန်းနိုပ်ဆက်မှုဒဏ်တွေကို မခံနိုင်တော့လို့နယ်စပ်ကို အရောက်ထွက်ပြေးလာကြဒါလား..ပထ၀ီအနေအထားအရ ထိုင်းနယ်စပ်နှင့် အလွန်ဝေးလံသော ဒေသများဖြစ်ပါသည်။ နောက်ကျောတွင်လည်း နအဖ တပ်စခန်းများရှိနေပါသည်။ ကြားညှပ် ကျန်နေသော ကျနော်တို့ လူမျိူးများဖြစ်ကြပါသည်။ ထိုအရပ်၌ရှိသော ငါတို့ လူမျိူးတွေ ဘယ်လို ပျောက်သွားဒါလည်း..???? ယျေဘုယအားဖြင့် နှစ်ခုစလုံး ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။ တချို့ က အသတ်ခံရ ဒါဖြစ်ပြီး တချိူ့ က နယ်စပ်ကို တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေ အကူအညီနဲ့ရောက်လာနေကြဒါ ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။
ဗမာစကားပုံရှိတယ်..”သစ်ငုတ်လည်းဆွေး ကရင်လည်းပြေး” တဲ့….ခေတ်အဆက်ဆက်က ကျနော်တို့ လူမျိူးတွေ နည်းမျိူးစုံနဲ့ ဖျောက်ဖျက် တွန်းထုတ်ခံခဲ့ကြရဒါပါ။ ဒီစကားပုံလေးဟာ သူ့ ဟာနဲ့ သူအလကားဖြစ်လာဒါတော့ မဟုတ်ပါ။ တချိန်က ကျနော်တို့ ကရင်တွေ လယ်မြေသစ်တွေကို ချဲ့တွင်ရာမှာ ခက်ခဲ ခက်ခဲ ပင်ပန်းကြီးစွာနဲ့ဖေါ်ထုတ်ခဲ့ကြဒါပါ။ ဒါပေမယ့် ထိုအသစ်ဖေါ်ထုတ်နေတဲ့ လယ်မြေသစ်တွေမှာ ရှိတဲ့ သစ်ငုတ်တို တွေ ဆွေးစ၊ မြေရိုင်းတွေ လည်း မြေယဉ်တွေဖြစ်လာပြီး လုပ်စားကိုင်စားလုပ်ရတော့မည့် အချိန်မှာ လူမျိူးခြားတွေက ကျနော်တို့ ကရင်တွေကို လာပြီး ပြသနာရှာ သတ်ဖြတ်၊ တိုက်ခိုက်၊ မောင်းထုတ် နောက်ဆုံး အေးချမ်းစွာနေလိုတဲ့ ကျနော်တို့ လူမျိူးတွေက ကိုယ့်ဌာနေတွေကို စွန့်ခွာ ကျောခိုင်းသွားပြီး တခြားမြေနေရာသို့ထွက်ခွာသွားကြဒါဟာ ရှေးဗမာဘုရင်ခေတ်တွေမှာသာမက၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီး အချိန်ကာလများ နှင့် ယနေ့ အချိန်ကာလအထိပါ။ ခေတ်အဆက်ဆက် ခောတ်ပြောင်းလည်းမှုနှင့်အတူ ကရင်လူမျိူးများ ဖျောက်ဖျက်ခံရပြီး ထွက်ပြေးနေရမှုတွေ ပုံသဏ္ဍန်ချင်းတော့မတူကြပါ။ သို့ ပေသော်ငြားလည်း အနှစ်သာရနဲ့ ကျိူးဆက်တွေက အတူတူပဲဖြစ်နေပါသည်။ ဒါကြောင့်မို့ဗမာစကားပုံ “သစ်ငုတ်လည်းဆွေး ကရင်လည်းပြေး” ဆိုတဲ စကားဟာ ယနေ့ အထိကျန်နေခဲ့ဒါပါ။
ကျနော်တို့ လူမျိူးများရဲ့ အခြေအနေဟာ စိုးရိမ်အမှတ်သို့ ရောက်နေပြီးဖြစ်ကြောင်းအသိပေးလို၍ စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် ကျနော်တို့ ၏ အမျိူးသားရန်သူကို လက်တွဲညီညာစွာဖြင့် အတူတကွ တွန်းလှန်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
FBR အစီရင်ခံစာကို အောက်တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Fbr Report 25 Dec 2009
Posted by Thaw Htoo at 8:48 PM
ကျနော်တို့ လူမျိူးတွေကို လူစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့ သတ်ဖြတ်နေဒါတွေ အတွက် ကျနော်တို့ ကရင်လူမျိူးတွေ ဘယ်တော့မှ မေ့မှာမဟုတ်ပါ။ ဂျူးခြောက်သန်းကျော်ကို နာဇီတွေက သတ်ဖြတ်ခဲ့ပေမယ့်..ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ဂျူးတွေ နောင်တချိန်မှာ အစ္စရေးနိုင်ငံကိုပြန်လည်တည်တောင်နိုင်တဲ့သာဓက တွေရှိခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာ ယနေ့ ကရင်တွေ ပြန့်ကျဲနေပြီ..နောင်တချိန်မှာ သမိုင်းအကွေ့ တစ်ခု ပြန်လည် ရင်ဆိုင်ကြရပါမည်။
ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ ဖာပွန်ဗုံးပေါက်ကွဲမှုသည် နအဖ တပ်...
ဝ အရေး နောက်ဆုံးရက်နီးကပ်လာ၊ ဆွေးနွေးမှုမရှိသေး
နအဖ စစ်တပ်၏ လူအခွင့်အရေးချိူးဖေါက်မှု နှင့် တိုက်ပ...
ကလောင်နံမည် Astrologer မှ တင်ပြချက် နှင့် ဖူးဒို မ...
သန့် ရှင်းသော ညမှာ တိတ်တဆိတ် ပြီးဆုံးသွားသော ခရစ်စ...
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မြန်မာ အပါအ၀င် တောင်းစားသူများကု...
ကျနော်နှင့် (ကညင်ဒုံ) တိုက်ပွဲ
မြန်မာ့ တပ်မတော်တွင်းက ဆရာများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ (အပိုင်...
မြန်မာ့တပ်မတော်တွင်းက ဆရာများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ အပိုင်း - ၁
သောသီခို Cbox မှ Zeal kyi နှင့် ကရင်တိုင်းရင်းသားဖ...
လူ့ အခွင့်အရေးချိူးဖေါက်မှုနှင့် တိုက်ပွဲသတင်း
မြစ်ကြီးနားတွင် မနောပွဲ ကျင်းပရန် ပြင်ဆင်နေ
ဗမာ့တပ်မတော်၏ လူ့ အခွင့်အရေး ချိူ့ ဖေါက်မှုသတင်းနှ...
ကျွန်တော်၏ညီအစ်ကို DKBA ထံသို့ (၃)
ဖူးဒေါန တိုက်ပွဲအတွေ့ အကြုံအပိုင်း(၃)
တပ်မတော်မှ ယာဉ်ထိန်းရဲ (မော်တော်ပီကယ်) များ
လူ့ အခွင့်အရေးချိူးဖေါက်မှု နှင့် တိုက်ပွဲသတင်း
ဖူးဒေါန၏တိုက်ပွဲအတွေ့ အကြုံ အပိုင်း(၂)
KNU Statement regarding Bomb Blast in Papun, Karen...
ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ဖာပွန်မြို့ ပေါ်တွင် ဗုံးပေါက်မှ...
ဖာပွန်မြို့ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ကေအဲန်ယူလက်ချက်ဟု နအဖထုတ...
ဖာပွန်မြို့ကရင်နှစ်သစ်ကူး နေ့ တွင် ပေါက်ကွဲသော ဗ...
ဖူးဒေါန၏တိုက်ပွဲအတွေ့ အကြုံ အပိုင်း(၁)
2009 စက်တင်ဘာလအတွင်း KNLA ဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားသော တို...
ကရင်နှစ်သစ်ကူး အခမ်းအနား ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် စည်ကား...
Thousands of Chinese Vietnam war veterans join Wa
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိူးသားကောင်စီ NCUB မှ ...
ဗမာ့တပ်မတော်၏ ကရင်လူမျိူးများအပေါ် လက်ရှိ ဆက်ဆံနေပု...
ကရင်အမျိူးသား နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်နေ့ သို့ ပေးပို့ သေ...
နှစ်သစ်မှာ အကောင်းဆုံးကို မျှော်လင့်ထားသလို အဆိုးဆ...
တကွက်မှားလျှင် ၂ဝ၁ဝ မှာမြွေပေါက်ခံသွားရနိုင်တယ်
မြန်မာ့ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် တ...
ဝှက်သယ်တဲ့ မြောက်ကိုရီးယားလက်နက် အမြောက်အများ ဖမ်း...
စစ်တပ်ကို နိုင်ငံသားများထက် အခွင့်ထူးပေးထားသော အြေ...
နယ်စပ်ကို လျှပ်တပြက် လာရောက် လည်ပတ်ခဲ့သည့် တိုင်းမ...
တရုတ်စစ်ဗိုလ်ချုပ် မြန်မာပြည်ရောက် နယ်စပ်ဒေသ ကိစ္စေ...
နယ်ခြားစောင့်တပ်လက်ခံသည့် အပစ်ခတ်ရပ်အဖွဲ့များ ကိုယ...
New Year Address by KNU President Saw Tamlabaw
New Year Address by Karen Refugee Committee
စစ်အစိုးရ၏ `လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ရာဇဝတ်မှု´ စစ်ဆေးရန်...
နအဖ စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးဌာနက ဝ တပ်ဖွဲ့ နယ်မြေတောင်းဆိ...
ဒီကေဘီအေ တပ်သားတဦး လက်နက် ၃လက်နှင့်အတူ ကေအဲန်ယူထံ...
စစ်သား၊ စစ်ကျွန်နှင့် ကျွန်ဝယ်ရာ အဆစ်ပါသူများ
ဗိုလ်ကတော်တွေ ဘာလုပ်ခဲ့လဲ၊ ဘာလုပ်နေလဲ
ရွာသားများကို စစ်တပ်မှ မိုင်းဖောက်၍ ခြိမ်းခြောက်
နအဖ စစ်တပ် ဒါဏ်ခံနေရတဲ့ ကရင်ပြည်သူများ
(၂၇၄၉)ခုနှစ် ကရင်နှစ်သစ်ကူးသို့ ပေးပို့ သော ကရင်လူ...
လက်နက်ဖြင့် ကာကွယ်မည့် မူကို ဝ' တပ်က အောက်ခြေကို ချပြ
ကျေးရွာ ဥက္ကဌတဦး ပစ်သတ်ခံရ
နယ်ဆင်မင်ဒဲလား၏ ခေါင်းဆောင်မှု စံနမူနာ (၈) သွယ်
ဖုန်ကြားရှင်းရုံးတာဝန်ခံအား နအဖ ထောင်ဒဏ် ၁၂ စီရင်
ဆိုမားလီယား ဝန်ကြီးများ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် သေဆုံးရ
မြ၀တီ-ကော့ကရိတ် လမ်းပေါ်ရှိ တံတားကျိုး စစ်ဆေးရေးဂိတ...
တိုက်ပွဲကြောင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှု ဒီကေဘီအေ ပိတ်ပင်
၀ နှင့် နအဖ တိုက်ပွဲဖြစ်နိုင်ခြေအလားအလာ ရာနှုန်းများ
ဖါးကပ်တိုက်ပွဲ - အပိုင်း (၃)
တောင်ငူဒေသတွင်း လုပ်အားခိုင်းစေမှု ပိုများလာ
ကရင်ပြည်နယ်တွင် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့မည်ကို ပြည်သူမ...
တိုက်ပွဲ နှင့် လူ့ အခွင့်အရေး ချိူ့ ဖေါက်မှု သတင်း
ကလလတ နယ်ခြားစောင့်တပ် ပြောင်းလဲမှု ပြည်သူများ ပိုမိ...
KPF ဥက္ကဌ စောသုမုဟဲ ကျန်းမာရေး အလွန်ဆိုးရွားနေ
Nationalities Youth Forum မှ PNLO နှင့် SSA-S အဖွဲ...
နှစ်ဖက်အကြား ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းမည်ဟု SSA နှင့် PNLO...
အမည်မသိ လက်နက်ကိုင်တစု ပင်လုံမြို့ ရာအိမ်မှူးတဦးအာ...
ကျနော် နှင့် ၀မ်းခါ တိုက်ပွဲ
̏ မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် ဒီမိုကရေစီ˝
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး မျက်...